Dawladda Soomaaliya oo Somaliland uga digay Weeraro kaga yimaadda Al-Shabaab | Xarshinonline News
Dawladda Soomaaliya oo Somaliland uga digay Weeraro kaga yimaadda Al-Shabaab
Muqdisho (NNN)- Wasiiru-dawlaha Gaashaandhigga ee Dawladda Shariif Sh. Axmed ee Soomaaliya Yuusuf Maxamed Siyaad (Indho-cadde), ayaa Dawladda iyo Shacabka Somaliand uga digay khataraha iyo Weeraro kaga yimaadda Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaallama Koonfurta Soomaaliya. Waxaanu baaq u jeediyay Shacabka, Dawladda iyo Axsaabta Somaliland.
Yuusuf Maxamed Siyaad (Indho-Cadde) oo hore uga mid ahaa masuuliyiintii Maxkamadihii Islaamiga ahaa, isla markaana ku biiray Dawladda Shariifka ee Soomaaliya, ayaa mar uu shalay Shir-jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, wuxuu kaga hadlay xaaladaha amni ee Maamul-gobolleedka Puntland ee Soomaaliya oo uu sheegay in Miinooyin ay dhawaan soo bandhigeen Maamul-gobolleedkaasi ahaayeen kuwa ay Al-Shabaab gacanta ku sameeyaan. Waxaanu Dawladda Somalialnd iyo Maamul-gobolleedka Puntland ee Soomaaliya u jeediyay inay meel uga soo wada-jeestaan ilaalinta amnigooda. “Waxaan arkayay Puntland Miino kuwa gacanta lagu sameeyo ah oo ay soo bandhigeen oo ay qabteen, runtii waa Calaamada lagu yaqaano nimankan (Al-Shabaab) oo ay isticmaalaan, oo ah la-dagaallan nabadeed. Dawladda Somaliland iyo Maamul-gobolleedka Puntland waxaan ku baraarujinayaa nimankaasi (Al-Shabaab) waa niman farsamo badan, mar qabiil bay u dhex galayaa, mar Culimo ayay u dhex galayaan, mar Siyaasad ahaan ayay u dhex galaan. Marba meesha ay isleeyihiin waad ku gabban kartaan, ayay u dhex galayaan. Markaa waxaan u soo jeedinayaa inay amnigoodameel uga soo wada jeestaan oo ay adkaystaan amnigooda.” Ayuu yidhi Indho-cadde.
← Ciidamada Booliska ee Burco oo gaadiidka la leeyahay Maamul-goboleedka Puntland ka qab-qabtay magaaladaas
Shirguddoonka Wakiillada Somaliland oo safar dhulka ah ku soo galay Hargeysa →